कमरेड मुक्ति « Sansar News
२१ आश्विन २०७३, शुक्रबार १३:०२
त्यो जेठ महिना थियो ।
आकाशबाट एक थोपा पानी धरतीमा नचुहाईकन वैशाख महिना पनि सुटुक्क बितेको थियो ।
‘खोई के भएको हो कुन्नी समय साल ! यति लामो खडेरी कहिल्यै परेको थिएन ….. ! ’ बुढापापा भन्थे । चैत्रको पहिलो हप्तातिर आकाशबाट चुहिएको एक झर पानीले भिजेको बारीमा लेकतिरका किसानहरुले मकैका बिऊ रोपिसकेका थिए । तर जेठ महिनाको आधी उमेर बितिसक्दा पनि आफ्ना बारीमा मकैका बिऊ रोप्न नपाउँदा बेसी तिरका किसानहरुको अनुहारमा खुसी झुल्किएको थिएन । यति नै बेला देशको राजनीतिक भविष्यको आकाशमा मडारिरहेको अनिश्यका काला बादलले कामरेड मुक्तिको मनमा चिन्ताको वर्षा गराइरहेको छ ।
द्येशमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्मपन्न भएर संविधानसभाको गठन भएको थियो । दुई वर्षको लागि भनेर गठन भएको संविधानसभाले चार वर्ष बिताउन लाग्दै थियो । संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने छ र आफ्नो भाग्यको सुनौलो बिहानी उदाउने छ भन्ने आशाको मझेरीमा सपनाको मीठो खीर खाँदै बसेका जनताहरु संविधानसभाको नियती देखेर निराशाका घट्का पिउन थालेका थिए ।
त्यत्तिबेला काठमाण्डौंको वानेश्वर रहेको अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संविधानसभा भवन कायम गरिएको थियो । संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिन १४ गते आउन एक दिन मात्र बाँकी थियो । काठमाण्डौं शहरदेखि निकै टाढाको गाउँ–घरमा बसिरहेको कमरेड मुक्तिलाई देशमा नयाँ संविधान जारी हुने बेलाको काठमाण्डौं शहरको रमझम हेर्न मन लाग्यो । त्यसैले ऊ आफूसँग भएको जम्माजममी एकजोर अर्धानो साधारण सर्ट, पाइन्ट र म्याजिक चप्पल पहिरिएर काठमाण्डौ शहरमा हान्निएर पुग्यो ।
काठमाण्डौं शहरको आकाशमुनी कमरेड मुक्तिले पाइलो टेक्दा झमक्क साँझ परेको थियो । नयाँ बसपार्कबाट लुखुरलुखुर हिँडेर ऊ मनमैजु उकालो लाग्यो र गाउँले साथीको डेरामा पुग्यो । रातभर उसको आँखामा निन्द्रा परेन, भोली संविधानसभाले कस्तो संविधान जारी गर्ला र त्यो संविधानको पानामा दश वर्ष भन्दा लामो जनयुद्धले उठाएका माग र मुद्दाहरु समावेश गरिएको होला कि नहोला भन्ने पीरले उसको मुटुको भेट्नोलाई उधिनी रहयो ।
१४ गते बिहान सबेरै ओछ्यानबाट उठेको कमरेड मुक्ति त्यही साथीले पकाएर दिएको खाना खाएर बाहिर निस्कियो । सरासर हिँडेर ऊ नयाँ बसपार्कमै आइपुग्यो र नयाँ बानेश्वर जाने बसमा चढ्यो । यो भन्दा पहिले कहिल्यै ऊ संविधानसभा भवन बानेश्वर चोकैमा पर्छ भन्ने कुरा चाँही अरुहरुबाट सुनेको थियो ।
करिब एक घण्टा समय लगाएर बसले कमरेड मुक्तिलाई नयाँ बानेश्वर चोक भन्दा दुई किलोमिटर परै तीनकुनेनिर ओरालीदियो । घामको रापिला किरणपुञ्जलाई शिरमाथि थापेर उसले आफ्नो पाइलालाई नयाँ बानेश्वरतिर लम्कायो । घामले र जिज्ञाशाले असिनपसिन भएर ऊ बानेश्वर चोकमा पुग्यो । बानेश्वरको फराकिलो कालोपत्रे चोकमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सङ्गठनका मान्छेहरु मात्र नभई विभिन्न जाति र क्षेत्रका मान्छेहरु पनि भेला भइसकेका थिए ।
यसरी भेला भएका मान्छेहरुले संविधानसभाबाट जारी हुन लागेको संविधानको पानामा लेखियोस भनेर आ–आफ्नो मागहरुलाई विभिन्न किसिमले प्रस्तुत गरिरहेका थिए । समूह–समूह बनाएर आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गरिरहेका यस्ता मान्छेहरुले आ–आफ्ना पार्टी, सङ्गठन, जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाका झण्डाहरु फहराइरहेका थिए । कुनै समूहले चाँही सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाइरहेका थिए भने कुनै समूहले चाँही चर्काचर्का क्रान्तिकारी नारा उरालिरहेका थिए ।
आ–आफ्ना जातीय पहिचानमा भेला भएक अधिकांश समूहहरुका छेउछाउ आफ्नो वर्गीय पहिचान बोकेर कमरेड मुक्ति डुलि रहयो । आँखाभरी नयाँ नयाँ उत्सुकता बोकेर हिँडिरहेको उसको अन्तरमनले चाँही देशले वर्गीय शोषण र उत्पीडनबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउने संविधान पाओस् भन्ने कामना गरिरह्यो ।
वर्गीय असमानता, शोषण र उत्पीडन नै नेपाली समाजभित्रका सम्पूर्ण शोषण र उत्पीडनको मुल कारण हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो उसले । हिँड्दाहिँड्दै, नयाँ–नयाँ मान्छेहरुका अनुहार हेर्दाहेर्दै, विभिन्न विभिन्न किसिमका कुराहरु सुन्दासुन्दै बेलुकीको पाँच बजेको उसले पत्रै पाएन । संविधानसभन भवनको ढोकाबाट संविधान तत्काल बाहिर निस्कने सम्भावना नदेखेपछि ऊ भोको पेट लखतरान शरीर बोकेर रातीको आश्रय खोज्दै फेरि बालाजुतिर मोडियो ।
नभन्दै त्यो दिन राति ११ बजेसम्म संविधानसभाले आफ्नो गर्भबाट देश र जनताको निम्ति संविधान जन्माउन सकेन । बरु राति १२ बजनुभन्दा पहिल्यै देशका सरकार प्रमुखबाट आगामी मंसिर ७ गते अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा पो भयो । रेडियोले सुनाएको यस्तो नमिठो समाचार सुनेर कमरेड मुक्र आफैंभित्र निकै दुःखी र आन्दोलित भयो । राति राम्ररी निदाउन सकेन ऊ ।
जेठ १५ बिहान सबेरै आँखाभरि अधकल्चो निद्रा बोकेर कमरेड मुक्ति हुर्तुराउँदै माछापोखरी चोक नजिकैको ‘गफगाफ’ चिया दोका तिर लम्कियो । गफगाफ चिया दोकान त्यस दिन पनि बिहानैदेखि खुलेको थियो । त्यही चिया दोकानको बाहिरपट्टी बेन्चमा बसेर मान्छेहरु चियाको चुस्कीसँगै विभिन्न विषयमा तर्कविर्तक गर्दै थिए । चियाको घुट्को र चुरोटको सर्काे पालैपालो तानिरहेका चार जना मान्छेहरुको बीचबाट शान्तरामले बोल्यो –
‘ऊ त्यै हैन, क्रान्तिका नायकका विरुद्ध लेख्ने ?
शान्तरामको मुखबाट निस्किएको यो वाक्य चिया दोकानतिरै लम्किरहेको कमरेड मुक्तिको कानमा ठोकिन आइपुग्यो ।
‘हो हो, त्यै हुतिहारा हो ! आफू क्यै गर्न नसक्ने, अरुले ग¥या नि देखी नसहने !’– पावरदार चस्माबाट आँखा तन्क्याउँदै इचछारामले भन्यो ।
यी शब्दहहरु ‘गफगाफ’ चिया दोकानको छेवैमा पुगिसकेको कमरेड मुक्तिको कानमा तातो झिरझै रोपियो ।
‘हैन ए सर, तपैंले के लेख्नु भो हँ, त्यस्तो चर्चित कुरा ? –चियाको गिलास हातमा लिएको विवेकरामले उत्सुकता भरिएका आफ्ना आँखालाई कमरेड मुक्तिको अनुहारमा चिप्लेटी खेलाउँदै सोध्यो र आफू बसिरहेको बेन्चको अर्काे छेउपट्टि सर्दै ‘लौ बसौंं सर’ पनि भन्यो ।
क्ेही निमेष यताउतिका अनुहारमा आँखा पु¥याउँदै बिताएपछि मुक्ति त्यही बेन्चको एक छेउमा टुसुक्क बस्यो । ‘के लेख्या त्यस्तो ? लेख्ने कुरा अरु क्यै पाएनौं ? क्रान्तिको नायकको छाला खुइल्या र तपैंलाई के फाइदा ? शिखर चुरोटको लामो सर्काे तानेर धुँवा उडाउँदै देशभक्तले सोध्यो ।
इति कुराहरु सुनिसकेको कमरेड मुक्तिको मनमा अनेकन विचारहरु पैदा भइसकेका थिए । आफ्नो छँदाछँदैको जागिर छोडेर क्रान्तिमा हिँडेको कमरेड मुक्तिले केही समय केही सोचे जस्तो गरेर बितायो ।
‘के लेखेको छु र त्यस्तो नभएको कुरा ? कमरेड मुक्तिको मुखबाट मसिनो स्वर निस्कियो ।
‘यौटा राष्ट्रिय साप्ताहिकमा छपाका हैनौ ? मैले त तिम्ले छपा कुरालाई कटिङ गरेर राख्या छु । लेख्न पाएँ भन्दैमा जे पनि लेख्ने अनि यही पार्टीमा नि बस्ने ? इच्छारामले आँखा तर्दै हप्कायो ।
कमरेड मुक्तिको आँखा इच्छारामको अनुहारमा सोझिए । इच्छारामको ख्याउटे अनुहारका चाउरीएका लुन्द्राहरु आक्रोशको कालो रङ भरिएको देखियो । अरुहरुका आँखा कमरेड मुक्तिको अनुहारमा सोहोरिन आइपुगे ।
कमरेड मुक्तिले मेसो मिलाएर अन्तष्करणको आवाज निकाल्यो । ‘मेरो मनमा लागेको कुरा, मैले देखेको कुरा लेखें । पार्टिको बारेमा, नेताहरुको बारेमा समर्थन र आलोचना गर्ने अधिकार मेरो पनि छ । हाम्रो पार्टी कुनै जमिन्दारको मौजा होइन । यो पार्टीका कार्यकर्ता कुनै जमिन्दारका हली र गोठाला पनि हैनन् । यो पार्टी र क्रान्तिमा मैले पसिना बगाएको छु । क्रानितमा होमिएर कयौं दुःख हण्डर खाएको छु । व्यक्तिगत रुपमा केही गर्न नसकेर यो पार्टीमा लागेको मान्छे हैन म । देश र जनताको लागि राम्रो होला भनेर स्कुलको हेडमास्टर छोडेर, सरकारी जागिर छोडेर क्रान्तिमा होमिएको मान्छु हुँ । तर अहिले पार्टी र क्रान्तिको हालत देखेर खेल्न मन लाग्यो, लेखें । ’
‘तिम्रा जस्ता त्याग हाम्ले नी ग¥या छौं भाइ । बढी नखोक, हेडक्वाटरलाई यसरी गाली गरेर यै पार्टीमा बस्न सुहाउँछ ?’ इच्छारामले आँखा पल्टाउँदै र निधार खुम्च्याउँदै भन्यो ।
इतिकैमा राष्ट्रसेवकको मुखबाट चट्याङ गर्जेझैं आवाज निस्कियो –बढी कुरा नगर् हेर मुक्ते, फकाल्दिँला तेरा बङगारा ! हेडक्वाटरको विरुद्ध लेखेर, हाम्रा नायकको विरुद्ध लेखेर आफूलाई बडो क्रान्तिकारी हुँ भन्छस् ?’
कमरेड मुक्तिका आँखा राष्ट्रसेवक तिर केन्द्रित भए । राष्ट्रसेवकले आफ्ना दुवै हातका औंला खुम्च्याएर मुठी दह्रो बनाइरहेको थियो । कमरेड मुक्तिले राष्ट्रसेवकको आँखामा गोमन साँपको आँखा अवतरित भएको देख्यो ।
तर त्यत्रो क्रान्ति लडेर आएको कमरेड मुक्ति पनि के कम थियो र !
रिन लागेर अरु पार्टीले नपत्यार घरमा खान लाउन नपार क्रान्तिमा हिँड्या होइन म, बुझ्नु भो । पार्टि र आन्दोलनमा लागेर कुनै बद्मासी गरेको छैन । यही नेतृत्वले धोका नदेला भनेर क्रान्तिमा हिँडेको हुँ । यही आन्दोलन र क्रान्ति भनेर आफ्नो जीवनको उर्वर उमेर सिध्याएँ । मैले किन पार्टी छोड्ने ? हिजोको नीति सिद्धान्त छाड्नेले बरु पार्टी छाड्नुपर्छ । १५ हजारभन्दा बढी शहीदका रगतलाई लत्याएर हिँड्नेले बरु पार्टी छोड्नुपर्छ । के यस्तै व्यवस्था र यस्तै नेता बनाउनको लागि ती शहिदहरुले जीवन आहुति गरेका थिए ?’ निर्धक्क भएर कमरेड मुक्तिले भन्यो ।
नजिकै बसेर कुरा सुन्दै चिया पिइरहो एक जना भरिया दाईले प्याच्चै भन्यो – नेताको जीवना परिवर्तन भो, हाम्रा जीवनाँ परिवर्तन भएन । हिजो हामी जस्तो थेम, आज हाम्रो हालत हिजो भन्दा बढी झन् खराबभोको छ ।’
यसपछि पसलेले फ्याट्ट भन्यो–मुक्ति सरले भनेको कुरा ठिकै त हो नि । १५ हजार मान्छे मारेर, ३ हजार भन्दा बढी मान्छे बेपत्ता बनार खरबौंको भौतिक संरचनाहरु ध्वसं बनार जनताका हजारौं छोराछोरीलाई बिचल्ली बनार गरिब जनता र देशकमा खोई परिवर्तन भो ?’
उनीहरुका कुरा चुपचाप सुनिरहेको विवेकरामले गम्भीरतापूर्वक भन्यो–‘जनताले यीनका विरुद्धमा फेरि अर्काे पार्टी बनाउँछन्, अर्काे नेता बनाउँछन् ! जनता कसैका दास होइनन् । जनताहरु त जुन पार्टी र जुन नेता असल छन् त्यसमै लाग्छन्, हामी पनि त्यसमै लाग्छौं ।’
विवेकरामको कुरा सुनेर कमरेड मुक्तिको अनुहारमा एक पत्र खुसी पोतियो । भरियादाइ पनि मुसुक्क हाँस्यो । वातावरण यसरी बिस्तारै कमरेड मुक्तिको पक्षमा बलियो बन्न थाल्यो । शान्तराम, इच्छाराम, र राष्ट्रसेवकको पक्षमा बोलिदिने मान्छे त्यतिबेला कोही देखा परेन ।
जाऔं, यस्तोको मुख हेरेर के बस्नु ?’ राष्ट्रसेवकले शान्तराम र इच्छारामको अनुहारलाई नियाल्दै भन्यो ।
राष्ट्रसेवकको आग्रहलाई शिरोपर गर्दै शान्तराम र इच्छाराम जुरुक्क उठे । उनीहरु तीन जनाले खाएको चिया र चुरोटको पैसा राष्ट्रसेवकले नै ति¥यो । यसपछि हारेको कमाण्डरझैं राष्ट्रसेवक अघि लाग्यो शान्तराम र इच्छाराम सिपाही झैं उसको पछि लागे ।
इस्ता बदमासहरुको बोलबोला हुन थालेपछि तपैंहरु जस्ताको के औचित्य हुन्छ र सर तपैंको पार्टीमा । विवेकरामले चियाको अन्तिम घुट्को निल्दै भन्यो ।
‘पसलेले थप्यो– हो त नी !’
‘यस्तै यस्तै नेतार कार्यकर्ताले त हो नी त्यत्रो क्रान्ति गरेर आएको पार्टीलाई यस्तो हालतको पार्टी बनाएको । नेतृत्वले गरेका कमजोरीहरुप्रति औंला ठड्याएको भए नेताहरुले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनथे । पार्टी गतिलो बन्थ्यो ।’– कमरेड मुक्तिले गम्भीरतापूर्वक भन्यो ।
पसलेले पनि प्रसङ्ग मिलाएर भन्यो ।
त्यत्तिमात्रै हो र ! त्यो शान्तराम त जुन पार्टी सत्तामा पुग्छ उसकै पछि लाग्छ । ठेकेदारी काम गर्छ । ठूला नेता र मन्त्रीहरुसम्म पहुँच भएका कार्यकर्ताहरुको पछि लाग्छ । यस्ता कार्यकर्ताहरुको निम्ति अन्न–पानीको व्यवस्था पनि मिलाई दिन्छ । पैसाले भरिएका ब्रिफकेस बोकेर नेता र मन्त्रीका कोठा–कोठा चहाद्र्ध । मेरै गाउँको मान्छे हो त्यो, पैसा त कति कमायो कमायो । अरु ठेकेदारले सम्पन्न गरेका योजनाहरु एक वर्ष टिक्छन् भने यसले बनाएको चाही छ महिनासम्म पनि टिक्दैनन् । अचेल त ऊ क्रान्तिकारी पार्टीको सदस्य बनेर ठेकेदार संगठनको जिल्ला नेता बनेको छ भनने सुनेको छु ।’
विवेकरामले इच्छारामको इतिहास सुनाइदियो ।
हेर्नुस् न, कत्ति न ठूलो मान्छे भएँ भन्छ त्यो इच्छाराम पनि । पञ्चायति शासनभरी त्यो इच्छाराम पञ्चे नेताका दास जस्तै बन्यो देशमा बहुदल आएपछि पञ्चहरुले पनि पार्टी खोले । पञ्चे पार्टीमा लाग्नुपर्छ भन्दै आफूले भनेको मान्ने मान्छेहरुलाई पञ्च नेताहरुको घरसम्म पु¥याएर पञ्चे पार्टीको सदस्यता थमाउन थाल्यो । पञ्चे पार्टीले आफुलाई संसद्को टिकट नदिएपछि चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्यो र मयुर चिन्ह लिएर भोट माग्दै हिँड्यो । कसैले पत्याएनन् चुनाव हा¥यो । राखेको धरौटी पनि फिर्ता पाएन । उद्योग व्यवसाय गरेर खाने हुति नभएको मान्छे त्यो । चुनावमा लागेको रिन तिर्ने कुनै उपाय भएन उसको । साहुहरुले ताकेत ागर्न थालेपछि शहरको डेरा छोडेर अन्यत्रै बस्न थाल्यो । यसरी पनि ऋण तिर्ने कुनै उपाय फेला नपारेपछि भूमिगत भएर हिँड्यो । पछि युद्धविराम भयो । युद्धविरामको अवधिमा साहूहरुलाई तर्साएर आफूले ऋण लिँदा गरेको तमसुक साहूका हातबाट लियो र सबै च्यात्यो । पछि शान्ति सम्झौता भयो । पाँच वर्ष क्रान्तिमा हिँड्दा लाखौं सम्पत्ति कमायो उसले ।’
‘यसरी भारी बोकेर, पसिना बगाएर कमाको पैसाले किनेको अन्न खुवार क्रान्तिमा हिँडेका कयौं मान्छेलाई घरै पालें । चुनाउमा पनि यसै पार्टीलाई भोट हालें । त्यति धेरै सहयोग गरे भोट खेर गो । अव त किन दिउला र यिनलाई भोट । ’बसिरहेको ठाउँबाट नाम्लो च्याप्दै हिँड्यो ।
आफूले खाएको एक कप चिया र एउटा दुनोटको पैसा तिरेपछि भरियादाई दायँ हातले नाम्लो च्याप्दै हिँड्यो ।
कमरेड मुक्तिले पनि आफूले आएको एक कप चियो र एउटा दुनोटको पैसा पसलेको हात राखिदियो ।
‘अस्ति बेलुका गाउँबाट आएको । आजै गाउँ जानु छ, लौ अब म पनि हिँडे । मुसुक्क हाँसेर कमरेड मुक्तिले भन्यो र फटाफट हिँड्यो ।
पसलेदाइ र विवेकरामका अाँखा केहीबेरसम्म कमरेड मुक्तिको पछिपछि हिँडिरहे ।